EFCC agbakeghachighị N7.9 ijeri n’aka m - Okorocha – Globalgistng
Home/Igbo/EFCC agbakeghachighị N7.9 ijeri n’aka m – Okorocha
Gọvanọ Imo steeti mbụ na onye nnọchi anya Imo West Senatorial District, Senator Rochas Okorocha, boro ebubo na Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) na-egbochi ụgha megide ya, na-ekwu na kọmịshọn egoghachiteghị ya ego.
Mkpesa Okorocha gbasoro akụkọ a gbara onye isi nke Port Harcourt mpaghara EFCC, Mazị Usman Imam, na-ekwu na nnọkọ ndị nta akụkọ na Tọzdee na ọ natara ijeri N7.9 site na Okorocha mgbe ọ na-enyocha mpaghara mpaghara Enugu.
A kwukwara na onye isi EFCC kwuru na o kwuru okwu banyere akụ Okorocha nke akara ndị dị na Owerri na Abuja, site na kọmitii ahụ.
N’ịzaghachi ebubo ndị ahụ na nkwupụta na Fraịde na Owerri, Okorocha kwuru na ụlọ ọrụ na-ahụ maka igbochi ọgụ ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ nwetaghị ijeri N7.9 ma ọ bụ ego ọ bụla ọzọ n’aka ya.
Gọvanọ gara aga mara kọmiti ahụ ka o gosipụta ihe na-ezighi ezi ya site na ibipụta nkọwa na ndị nwe ego nke ego a na-ekwu na enwetaghachi n’aka ya.
Ọ mara ndị EFCC aka ka ha bipụta nkọwapụta nke akụrụngwa akụrụngwa nke akara ya ma weghaara ya n’aka ya, na-ekwusi ike na ngwongwo akara ya nwetara ya n’ihe dị ka afọ 20 gara aga.
Dabere na ya, ndị na-eso ya n’azụ duhiere ọrụ ahụ, na-ekwu na ọ ga-atụ anya iweghachị akụkọ ahụ na mgbaghara ọhaneze site na EFCC ụbọchị ndị na-abịa ma ọ bụrụ na kọmịshọ ahụ enweghị ike ịkọwa nkọwa nke ihe a na-akpọ N7.9 ijeri.
Nkwupụta nke onye ndụmọdụ mgbasa ozi ya, Sam Onwuemeodo bịanyere aka na ya, na-agụ, sị: “EFCC dị ka komputa ma ọ bụ Mr Usman Imam dị ka onye na Isi nke Enugu mpaghara mgbe ahụ, na taa, nke Port Harcourt Mpaghara, kọmịshọ ahụ, enwetaghị N7. Ijeri 9 ma ọ bụ ego ọ bụla ọzọ, sitere na Rochas Okorocha
“Site na nkwenye a, anyị na-agbagha EFCC ma ọ bụ Maazị Imam dị ka onye mere nkwupụta ahụ, iji gosipụta na anyị ezighi ezi site na ibipụta nkọwa nke Nnabata Bank ahụ ego ahụ na ndị nwe akaụntụ ahụ.
“Anyị ji EFCC na ndị ọrụ ya nsọpụrụ nke ukwuu. Anyị na-atụkwa anya na kọmitii ahụ ma ọ bụ Maazị Imam ga-ewere nkwenye anyị dị oke njọ, n’ihi na ndị Naijiria nwere ihu ọma ga-achọ ịma onye na-ekwu eziokwu ma ọ bụ onye na-agha ụgha.
“Ebe komputara achọpụta na o mejọrọ ọha na eze ma mebie onye gọvanọ Imo steetị ụzọ, ikekwe na-amaghị, anyị na-atụ anya na kọmitii ahụ ma ọ bụ Maazị Imam ga-eme ihe dị mkpa, nke bụ iweghachite nkwupụta mgbasa ozi wee gwa ndị Niger eziokwu. akụkọ. Ijeri N7.9 ahụ a na-enwerịrị ga-abụrịrị na Akaụntụ akụ. Ka ndị EFCC bipụta nkọwa nke akaụntụ nke na-enweghị oge ”.
Nkwupụta ahụ gara n’ihu, “Mr Imam kwuru banyere ngwongwo nke Okorocha nke kọmitii ahụ akara. Ọ dịkwa mkpa na Mazi Imam bipụtara akụrụngwa ndị ahụ n’ihi na Okorocha nwetawo ihe ndị ahụ akara ka afọ iri abụọ gara aga. Kemgbe Mazị Imam amalitela ikpe gbasara mgbasa ozi, ka edepụtakwa ihe ndị ahụ maka ndị Naịjirịa mata nke bụ eziokwu.
Anyị agwala akụkọ a ugboro ugboro na tupu ntuli aka nke afọ 2019, ihe ndị PDP dị na Imo degara ndị EFCC akwụkwọ, na-ebo ebubo na Okorocha emeela atụmatụ iji ego steeti niile iji kwado ntuli aka nke ndị ọ họpụtara. Ndị EFCC, na-ekwuchitere arịrịọ niile, weghaara akaụntụ niile nke steeti gụnyere ndị ebumnuche maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa, penshọn, ikike ịnata ụgwọ na ihe ndị ọzọ. Anyị emeela nkwupụta a ọtụtụ ugboro na EFCC ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ nwere mmasị ma ọ bụ ndị mmadụ emetụbeghị nkwupụta anyị.
Ọ dabere na arịrịọ ndị gọọmentị PDP dere mgbe Chief Chief Emeka Ihedioha na-emegide Okorocha na ezinụlọ, na ndị EFCC nọ n’olu Okorocha.
“Ọbụna mgbe gọọmentị rịọsịrị kọmịshọna na ndị ọrụ na-eme arịrịọ ahụ, gọọmentị guzobere ihe karịrị kọmiti iri na abụọ iji nyochaa Okorocha na ezinụlọ, n’otu okwu ahụ ma ọ bụ ihe ndị EFCC na-enyocha.
“Offọdụ n’ime akwụkwọ nyefere ozi gọọmentị ugbu a na steeti Gọvanọ Hope Uzodinma na-eduzi ebe ndị ọzọ ka nọ ọdụ ma na-eme ikpe ikpe na Okorocha.
“O doro anya na a ghahieghị EFCC. Kọmịshọna ahụ na-eji ụdị echiche a wee mepụta ikpe mgbasa ozi na Okorocha na n’ọnọdụ ụfọdụ, amala ya ikpe n’ihu ikpe ahụ Maazị Imam kwuru banyere ya.
“Anyị chọrọ ikwughachi na EFCC anatabeghị ego ọbụla n’aka Okorocha gụnyere ijeri ijeri N7.9 nke Maazị Imam kwuru. Ọ hapụkwara EFCC ka ọ gosipụta na anyị ezighi ezi. Ma ọ bụrụ na kọmitii ahụ achọpụta na nkwupụta anyị bụ akụkọ ziri ezi, Maazị Imam kwesịrị ịhapụ nkwupụta mgbasa ozi wee gwa ụwa akụkọ ziri ezi “.